Router အသစ်တစ်လုံး ဝယ်ရင်ကောင်းမလား ၊ ISA Server ထိုင&#415 — MYSTERY ZILLION
Router အသစ်တစ်လုံး ဝယ်ရင်ကောင်းမလား ၊ ISA Server ထိုင&#415
ကျွန်တော့် Cyber cafe မှာ ခုလောလောဆယ် SMC Router သုံးထားပါတယ်။ Bagan Net 512 Speed ယူထားတာတောင် နည်းနည်းလေးနေပါတယ်။ Modem လည်း မကြာခဏပိတ်နေရပါတယ်။ Modem Hang ဖြစ်တာလား။ Router Hang ဖြစ်တာလားတော့ မသိဘူး။ Default Gateway ကို Ping လုပ်လို့ လုံးဝ မရတော့ဘူး။ ဥပမာ - ping 10.x.x.x -t ပေါ့ဗျာ။ Request Timeout ပဲပြနေတယ်။ နှစ်ခုလုံးကိုပိတ်။ ပြန်ဖွင့်။ မိနစ်ဝက်စောင့်။ ဒါဆိုရင်တော့ ပြန်တက်သွားတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဖုန်းလိုင်းကိုတော့ အိမ်ကဖုန်းကိုဘဲ ပွားသုံးထားတာ။ ဒါကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။
Connection ပိုကောင်းပြီး ငြိမ်ဖို့ဆိုရင် SMC ထက်ပိုကောင်းတဲ့ router တစ်လုံး ဝယ်သင့်လား။ ဒါမှမဟုတ် ISA Server ပဲထိုင်သင့်လား။ Router ဝယ်ရင်ကော ဘာအမျိုးအစား ဝယ်ရင် ကောင်းမလဲ။ လူပြောများတာကတော့ Linksys. တစ်ချိုကျတော့ Netgear, TrendNet စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
ဒါမှမဟုတ် ISA Server ထိုင်ရင်ရော Minimum Requirements တွေက ဘာလိုမလဲ။ ကွန်ပျူတာ နောက်တစ်လုံးထားရမှာလား။ Router နဲ့ server ဘာပိုကောင်းလဲ။ BaganNet ADSL အတွက်ဆိုရင် ဘာက အသင့်လျော်ဆုံးလဲ။
MZ မှ ညီအစ်ကို/မ များ ကူညီကြပါဦးဗျာ။
SMC Router က ကောင်းပါတယ်ဗျ ... ကျွန်တော့် အထင် ဖုန်းလိုင်း မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဗျ ... ဖုန်းလိုင်းမကောင်းရင် အဲဒီလိုပဲဗျ
ဖုန်းလိုင်းမကောင်းရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ လိုင်းရှင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နေအိမ်က ဖုန်းလိုင်းကို ဖြတ်ပစ်ပြီး ဆိုင်ကို တိုက်ရိုက် join ရမှာလား။ နောက်မှ အိမ်ကို ပြန်ခွဲရမှာလား အစ်ကို။
Yes true it is because of your line status, I have that problem too. But first check with Bagan technician for making sure of your line condition to need to fix.
၁။ ဖုန်းလိုင်းကို စစ်ပါ.. ဖုန်းလိုင်း မှာ နွိုက်စ် ပါနေလား.. ပါနေတယ်ဆိုရင် ဖုန်းကြိုးလဲဖို့လိုနေပါပြီ
ကိုယ့်အိမ်ကနေဖုန်းပွိုင့်အထိလဲပေးရပါလိမ့်မယ်... ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ ရုံးကိုစာတင်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်
၂။ ဖုန်းလိုင်းကောင်းတယ်ဆိုရင် မီးအားငြိမ်မငြိမ်စစ်ရပါမယ်.. မီးအားမငြိမ်ရင်လည်း မိုဒမ်/ ရောက်တာ မီးမှိတ်မှိတ်သွားတတ်ပါတယ်.. ဒါဆိုရင်တော့ မီးအားငြိမ်အောင် အင်ဗာတာ ဘက်ထရီကိုသုံးလိုက်ပါ..
အဲဒါတွေအရင်စစ်ဆေးစေလိုပါတယ်.. အဲဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ရောက်တာ တစ်ခုခုချို့ယွင်းလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
tech.lover wrote: »
Noise ကို စစ်ကြည့်ပါ ... အဲဒါရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းလိုင်းကို စစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ ပြီး လိုအပ်သလို လဲသင့်ရင် လဲမှ ရပါမယ်။